रोमियो एण्डमुनाको यो कस्तो पोस्टर ! «
रोमियो एण्डमुनाको यो कस्तो पोस्टर !
Published :5June, 2018 2:02 pm
काठमाडौँ । साउन ११ गतेलाई प्रदर्शन मिति तय गरिएको फिल्म रोमियो एण्डमुनाको नयाँपोस्टर सार्वजनिकगरिएको छ । सार्वजनिकपोस्टरमा रोमियो र मुनाअर्थात नायकविनयश्रेष्ठ र नायिकासृष्टिश्रेष्ठदुवै छैनन् । किन सार्वजनिकगरियो त यस प्रकारको पोस्टर ?
यो फिल्मसँग नै सम्बन्धितपोस्टर हो, निर्देशक नरेश कुमार केसी भन्छन्, यो बक्समामुनाले आफ्नो इखलाई हाल्ने गर्दछिन् । यसैले हामीले पोस्टरमातपाईको कुनै इख छ भनेर प्रश्न गरेकाछौं । निर्देशक केसीका अनुसार रोमियो एण्डमुनाको यो बक्सवाला पोस्टर प्रतिबिम्वितपोस्टर हो । उसो त फिल्मको तीनगीतरपोस्टरसार्वजनिक भैसकेका छन् ।
सार्वजनिकतीनगीतहरु भिन्नभिन्नप्रकारकाछन् । सुरुमातीजगीत सार्वजनिकगरिएको थियो । त्यसपछिविकिनीगीत र रोमान्टिक पलपलगीत रिलिजगरियो । गीतमापाइएको विविधताफिल्ममा पनि पाइएला? डाइङ क्यान्डलनिर्देशकको दोश्रो फिल्म रोमियो एण्डमुनाप्रतिथपकौतुहलताबढेको छ ।
विनय र सृष्टिको शिर्ष भूमिका रहेको रोमियो एण्डमुनामानिर्देशक केसीको पटकथा छ भने संवादमानिर्देशकसँगनिरज महर्जनले साथदिएकाछन् । फिल्मनिर्माणमाप्रशन्नगोपाली, रामशर्मा र कविनशाक्यले सहकार्य गरेकाछन् ।